Izikelemu. Ungakwazi yini ukuhamba ngokusebenzisa isikhathi? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma ufunda nge-quantum physics futhi uhamba ngesikhathi noma kwezinye izilinganiso, imibono engapheli ivela ngezibalo zezibalo. Kulokhu, sizokhuluma nge- izibungu. Impela uzwile ngobukhona beminye imihlaba noma amaUniversal afanayo okwenzeka eqinisweni elifanayo esiphila kulo. Yebo, isibungu ngumnyango noma umhubhe oxhuma la maphuzu amabili esikhaleni nangesikhathi futhi esivumela ukuthi sisuke ku-Universe siye kwenye.
Yize ukuba khona kwento efana nale kungakaze kufakazelwe, emhlabeni wezibalo kungenzeka ukuthi zivele. Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ekuchazeni izibungu nokuthi zizosebenza kanjani uma izibalo zilungile.
1 Yini izibungu?
2 Ukuhamba ngesikhathi
3 Ukuphazamiseka kwesikhala nesikhathi
4 I-Die ichotshoziwe
Ngakho-ke leli gama libekwe phambi kwesethulo somnyango ophakathi kwama-University amabili afanayo sengathi ukuphela kwezithelo ze-apula. Ngakho-ke, siyizibungu eziyinqamula ukuhamba esikhaleni sesikhala. Kungashiwo ukuthi ziyizindwangu zesikhala sesikhathi esivumela ukuthi sihlanganise amaphuzu amabili aqhelelene komunye nomunye.
Ngokombono, ukusuka ku-Universe efanayo kuya kwenye kungashesha kunokudabula i-Universe yethu yonke ngejubane lokukhanya. Ngokusho kombono ka-Einstein wokuhlobana okujwayelekile, Le mibobo ekwazi ukusihambisa iye kwezinye izilinganiso ikhona. Izibalo zezibalo zikhombisa ukuthi singazithola kanjani izingosi ezinjalo, kepha akukho okufana nalokho okuke kwabonwa noma kwafezwa.
Banokungena nokuphuma ezindaweni ezahlukene esikhaleni nesikhathi. Indlela phakathi kwale minyango emibili yokuphuma iyona exhuma isibungu futhi ise-hyperspace. Le hyperspace ayilutho ngaphandle kwe- ubukhulu lapho amandla adonsela phansi nesikhathi kubangele ukuhlanekezelwa, ezala lesi sici esisha.
Lo mbono utholakala endleleni u-Einstein noRosen ababenayo lapho befuna ukuphenya ukuthi kwenzekani ngaphakathi komgodi omnyama. Elinye igama lale migodi ngu I-Einstein-Rosen Bridge.
Kunezinhlobo ezimbili zezikelemu ngokuya ngephuzu abalixhumayo:
Intrauniverse: Leyo yimigodi exhuma amaphuzu amabili kude neCosmos kodwa engeyeUniversal efanayo.
Ukuxhumana: Yizimbobo ezixhumanisa ama-University amabili ahlukene. Lezi, mhlawumbe, yizona ezibaluleke kakhulu futhi ezifiselekayo ukuzithola.
Vele, lapho kukhulunywa ngalolu hlobo lwento, ukuthi kungenzeka yini ukuhamba isikhathi kuhlale kubuzwa. Futhi ngukuthi impela sonke besifuna ukuhamba ngesikhathi ngezizathu ezahlukahlukene njengokulungisa amaphutha esikhathini esedlule, ukusebenzisa isikhathi esilahlekile noma ukumane siphile futhi sibhekane nenye inkathi.
Kodwa-ke, iqiniso lokuthi izimbungu zikhona nokuthi zingasetshenziswa ukuhamba esikhaleni nesikhathi kuyizinto ezehluke kakhulu. Enye yezinto ezenze abantu bakholelwa ukuthi lokhu kungenzeka kwaba inoveli "Yokuxhumana" kaCarl Sagan. Encwadini leyo noveli kuhlongozwa ukuthi kwenziwe uhambo ngesikhala nangesikhathi usebenzisa isibungu. Le noveli iyinganekwane yesayensi emsulwa futhi, yize itshelwa ngendlela yokuthi ibonakale ingeyangempela, akunjalo.
Into yokuqala ukuthi ososayensi bafaka kakhulu kule ndaba baqinisekisa ukuthi ubude besibungu bufushane kakhulu. Lokhu kusho ukuthi uma sihamba phakathi kokuphuma kwaso ngaleyo hyperspace, sasizobanjwa yikho, ngoba ukuphuma kuzovalwa maduzane. Kukhulunywa futhi ngalowo okwazile ukuphuma ngakolunye uhlangothi, angabe esabuya. Lokhu kwenzeka ngoba isibungu asidalwa njalo endaweni efanayo noma ngasikhathi sinye, futhi amathuba okuthola eyodwa ebuyela endaweni efanayo lapho ebuya khona aphansi kakhulu.
Ukuphazamiseka kwesikhala nesikhathi
Ngokomqondo wokuhlobana okujwayelekile, ukuhamba kwesikhathi kungenziwa kepha kunemibandela ethile. Okokuqala ukuthi singahambela esikhathini esizayo hhayi esidlule. Lokhu kunomqondo ongaholela ekuphambaneni okuthile kwesikhala nesikhathi. Cabanga isikhashana ukuthi uhamba uye esikhathini esedlule esikhathini ngaphambi kokuzalwa kwakho. Amaqiniso ahlukahlukene ongawavusa zingaguqula inkambo yomlando futhi zidale ukuthi ungakaze uzalwe. Ngakho-ke, ukube awuzalwanga, ubungeke ukwazi ukuhamba uye kokwedlule futhi ubungeke ubekhona.
Ngeqiniso elilula lokunyamalala, umlando ubungeke usebenze. Kufanele ucabange ukuthi, yize singesibo bonke abantu abadumile noma ukuthi singenza izinto ezinkulu ezibalulekile emlandweni ngezinga elikhulu (njengomongameli kahulumeni), sinikela nangezinhlamvu zethu zesihlabathi emlandweni. Senza izinto, sivusa imicimbi, sihambisa abantu futhi sakha ukuxhumana nabanye abantu okuthi uma benyamalala, ngabe azikaze zibe khona futhi besizodala indida yesikhashana.
Ngakho-ke, uma sihambela ikusasa, inkambo yemicimbi ngeke iguqulwe, ngoba kuyinto engakenzeki futhi kuncike kuphela kulokho esikwenzayo "manje". Le mibono ibuye iholele kwezinye izinhlobo zamaUniversal kanye nobukhulu obuyinkimbinkimbi ukwedlula indlela ezibonakala ngayo, ngoba sakha imigqa eminingi yesikhathi.
Iqiniso elilodwa elingasidlula lapho sihamba nge-space-time ngokusebenzisa izibungu ukuthi singacindezelwa size sife. Lezi izimbobo mancane impela (cishe ayi-10 ^ -33 cm) futhi azinzile kakhulu. Lokho kudonsa okukhulu kwamandla adonsela phansi okubangelwe yimikhawulo emibili yomhubhe kungadala ukuthi iphule ngaphambi kokuthi noma ngubani ayisebenzise ngokugcwele.
Ngaphandle kwalokhu, uma sizama ukweqa sisuka kokunye ukweqisa siye kwesinye, besingacindezelwa futhi siphenduke uthuli ngoba amandla adonsela phansi kulawa maphuzu afinyelela ezingeni eleqisayo. Njengoba ngokomqondo izibalo zezibalo zikwenza kwenzeke, kungenzeka esikhathini esizayo ukudala ubuchwepheshe obumelana namazinga adonsela phansi futhi ahamba ngesivinini esikhulu ngaphambi kokuba imbobo inyamalale.
Ngiyethemba lolu lwazi belunelukuluku lokwazi futhi lukujabulisile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Izikelemu
Yini ebingenzeka uma kungadaleka imbobo ku-Mars eya kwenye indawo yonke